कांग्रेसको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको व्याङ्ग्यात्मक उत्तरः धुलो टकटक्याएर अगाडि बढाइयो !
ARCHIVE, POLITICS » कांग्रेसको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको व्याङ्ग्यात्मक उत्तरः धुलो टकटक्याएर अगाडि बढाइयो !
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुबै छिमेकीसँग विश्वासयोग्य र भरपर्दो सम्बन्ध बनाउन चाहेको बताएका छन् । चीन र भारतलाई साथमा लिएर नै विकासको प्रयासलाई तिव्रता दिइने उनले बताए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ब्यग्यात्मक जवाफ दिए । सन् २०१६ मा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गरेलगत्तै आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको भन्दै उनले भने, ‘सम्झौता कहाँ छ भनेर खोज्नै समय लाग्ने गरी कुन पत्र मुनी परेको थियो । त्यसलाई निकालियो र धुलो टकटक्याएर अगाडि बढाइयो ।’